Baphi iimanyuwali, ReadMe.txt, Copyright etc?
Imibuzo malunga nabafanisi, ii-add-ons ne-Website
Imibuzo malunga akhawunti yam
Ukusuka auto-gxumeki uguqulelo 10 okanye + zonke documentations ibekwe kwi Amaphepha Ami ulawulo okanye amaxwebhu esekelwe kwi Windows umboniso wakho.
Landela le manyathelo ukusuka auto-installer ngaphantsi bookmark 10:
Oku kusebenza kwi Windows Vista, 7, 8 kunye 10.
Kwi desktop, nqakraza kwi « Menu Qala », Ngoko« zonke iinkqubo »Kwaye uye« Rikoooo Izongezelelo »Eneenkcukacha. Xa unqakraza kuyo, uza kufumana uluhlu Izongezelelo oye ezifakwe kwi computer yakho.
Ohter indlela, uza kufumana zonke ziquka amaxwebhu ingcambu ulawulo yakho Izongezelelo, exemple: C: \_ Iifayile yeNkqubo (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X \_ SimObjects \_ moya \_ ragela \_
NgeCawa Agasti 09 by rikoooo
Ngaba oku kuluncedo?